Waxaanu u haynaa koorsooyin tababar shaqo oo gaagaaban oo waxtar leh dadka raadinaya shaqo oo ka diiwaan gashan Arbetsförmedlingen (Adeega Shaqadda ee Dad waynaha). Maamulayaashada iyo abukaatayaashada waxay leeyihiin khibrado aad u badan iyo shabakad balaadhan oo xidhiidhada ganacsiga ah.
Waxaanu kaa caawin kartaan in aad hesho shaqooyinka aad ku habboontahay iyo sida loo codsado. Waxaad baran doontaa sida loo horumariyo khibradaada shaqo (CV) iyo sida loogu dedaalo waraysiga shaqadda.
Si wada jir aha waxaanu ula iman doonaa qorshe kaa caawinaya in aad gaadho ujeedooyinkaaga!
Ka hel in dheeraada halkan oo ku saabsan adeega Taageerada iyo ku Habboonaysiinta. Page editor: Web Manager